Regis San Francisco na -ekwuputa ọmarịcha ngwungwu “Were ụgbọ elu”
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Regis San Francisco na -ekwuputa ọmarịcha ngwungwu “Were ụgbọ elu”
culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • nzukọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Regis San Francisco, adreesị obodo mbụ maka ụlọ obibi okomoko, ọrụ amara na ịma mma na -adịghị agafe agafe, ekwuputala ngwugwu ọhụrụ maka ndị njem na ndị obodo na -achọ ebe obibi mara mma yana ahụmịhe pụrụ iche na ndagwurugwu Napa mara mma.
Ngwongwo okomoko nke San Francisco jikọtara ụzọ abụọ mara mma yana ahụmịhe Napa Valley pụrụ iche na BRION na Napa Valley Aloft.
A na -akpọ ngwugwu ọhụrụ na -atọ ụtọ "Were ụgbọ elu."
Ihe ngwugwu a na -enye ọmarịcha gụnyere njem ọkwọ ụgbọ ala, ọmarịcha nri nri nri, yana ịnya ụgbọ ala ikuku na -ekpo ọkụ nkeonwe.
Ihe ngwugwu “Were ụgbọ elu” nke ụlọ ahụ gụnyere ịnọ abalị abụọ n'otu n'ime St Regis San FranciscoNnukwu ọnụ ụlọ ime obodo mepere emepe, ụgbọ njem sedan okomoko nkeonwe na -aga ma si na Ndagwurugwu Napa nyere Bali , Ihe mara St. Régis nri ụtụtụ picnic ahụmahụ, onwe na-ekpo ọkụ ikuku balloon ride n'ikike nke Ndagwurugwu Napa Aloft, na ahụmịhe na -atọ ụtọ nkeonwe nke ukwuu na ụlọ ahịa mmanya kacha mma nke Napa, BRION.
Lilian Wagner, Director nke Ahịa na Azụmaahịa kwuru, "St. Regis San Francisco dị iche maka ndị njem na -achọsi ike ịhụ nka obodo San Francisco, nri nri na ndụ abalị yana ịma mma eke, ezigbo mmanya na ịdị jụụ nke Ndagwurugwu Napa." maka nkwari akụ. "Obi dị anyị ụtọ na anyị na ndị azụmaahịa Napa Valley a ma ama na -enye ndị ọbịa ohere ka ha nweta ihe kacha mma na" obodo "na" obodo ".
Ndị ọbịa na -edobe ngwugwu “Were ụgbọ elu” ga -amalite ọnụnọ ha na San Francisco, obodo nwere amara, ụdị na ọdịbendị. Mgbe ha rutere na St. Regis San Francisco, ha ga -ezukọ n'otu n'ime ụlọ nkwari akụ ọhụrụ a rụzigharịrị ọhụrụ, na -enwe obi ụtọ n'ịdị nkọ nke ụlọ ahụ, wee nata ndụmọdụ n'aka ndị otu ụlọ ọrụ Les Clefs d'Or concierge nke ga -enyere ha aka imikpu onwe ha n'ime. ebe nlegharị anya kacha mma, ụlọ nri na ụlọ ọrụ nka dị na mpaghara SOMA (South of Market Street) gbara ya gburugburu.
N'isi ụtụtụ echi, onye ọkwọ ụgbọ ala ga-eche ka ọ ga-ebuga ndị ọbịa na Ndagwurugwu Napa, nke amaara maka ọtụtụ narị ubi vaịn dị jụụ n'akụkụ ya na mpaghara mmanya ama ama n'ụwa. Nkwụsị mbụ nke ụbọchị a bụ Napa Valley Aloft, nke dị na akụkọ ihe mere eme Ụlọ Yountville. N'ọwụwa anyanwụ, ndị ọbịa ga -abanye n'ụgbọ ala balloon na -ekpo ọkụ nke dị elu ma na -awụlikwa elu n'elu ala mara mma nke mpaghara ahụ. Mgbe ha rutere, ha ga -enwe nri nri pịkiịk nke a kwadebere nke ọma site n'aka ndị otu nri nri St. Regis.
Mgbe emesịrị, ndị ọbịa ga -aga BRION, flagship Napa Valley winery nke onye nwe ụlọ Brion Wise dị na Vineyard Sleeping Lady a na -akwanyere ùgwù nke dị na ndịda obodo Yountville. N'ịbụ onye raara onwe ya nye imepụta otu ubi-vine Cabernet Sauvignon na igosipụta echiche Maazị Wise site na nchịkọta obere mmanya ejiri aka mee site na saịtị ubi-vine pụrụ iche na Ndagwurugwu Napa na Sonoma, ndị ọbịa nwere ike ịtụ anya ịnụ ụtọ ahụmịhe mmanya siri ike tupu ha alaghachi St. St. Regis San Francisco.
Regis San Francisco na-enye ọnụ ụlọ na ime ụlọ 260, nke ụlọ ọrụ ama ama ama dị na Toronto Chapi Chapo chegharịrị n'oge na-adịbeghị anya. Theredesign gbadokwara anya na ịkwalite oghere ukwu na ebe ihe omume 15,000 square nke St. Regis San Francisco, na -ekepụta mpaghara anụcha, ntụsara ahụ na nke mepụtara iji kwado mkparịta ụka na imekọ ihe ọnụ.
Ọnụ ego maka ngwugwu "Were ụgbọ elu" na -amalite na $ 12,985.00. Achọrọ ọkwa ọkwa ụbọchị 14 maka ịde akwụkwọ, n'oge a agaghị eweghachi ego zuru ezu. Ụbọchị agbajie na -adị, akwụkwọ ga -adị ugbu a site na Disemba 20, 2021. Maka ndoputa ma ọ bụ ajụjụ, biko kpọọ ngalaba ndokwa ụlọ oriri na nkwari akụ na 415.284.4009.
St Regis San Francisco mepere na Nọvemba 2005, na -ewebata ụdị ọhụụ nke okomoko, ọrụ na -adịghị ada ada, na ịma mma na -adịghị agwụ agwụ n'obodo San Francisco. Ụlọ ụlọ ahụ dị iri anọ, nke Skidmore, Owings & Merrill haziri, gụnyere ụlọ obibi nkeonwe nke 40 na-ebuli ọkwa 102 karịa ụlọ elu 19 St. Regis Hotel. Site na ọrụ ịsụ mmanya, nlekọta ndị ọbịa “na -atụ anya” na ọzụzụ ndị ọrụ na -enweghị atụ na ihe ndị dị oké ọnụ ahịa na ime ụlọ site na Chapi Chapo nke Toronto, St. Regis San Francisco na -enye ahụmịhe ọbịa na -enweghị atụ. Regis San Francisco dị na 260 Third Street. Ekwentị: 125.